हरेक बर्ष एउटा जिल्लामा बाथरोग सेन्टर « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७३, ७ भाद्र मंगलवार ०६:१४ मा प्रकाशित
रोशन कक्षपति, प्रबन्ध निर्देशक, नेशनल बाथरोग सेन्टर
अहिले बाथ पहिचानका लागि नेलफोल्ड क्यापिलरोस्कोपी टेष्ट स्थापना गरी सेवा दिन सकेका छौं । बाथले सुक्ष्म नशाहरुलाई पार्ने असर हेर्न यो टेष्ट महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस प्रविधिले बाथले नशालाई कति असर ग¥यो र नशाहरुको अवस्था के छ ? भन्ने देखाउँछ । यस किसिमको सेवा विरलै पाइन्छ ।
अहिले मुलुकमा बाथरोगबाट ग्रसित करिब ९० प्रतिशत जनता उपचारबाट बञ्चित छन् । हाल प्रदान भइरहेको बाथ उपचार सेवा पनि शहर केन्द्रित छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर नेशनल बाथरोग सेन्टरले बिकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त लिएर हरेक वर्ष एउटा जिल्लामा बाथरोग सेन्टर खोल्ने अभियान शुरु गरेको छ । यसबारे नेशनल बाथरोग सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक के भन्छन्—
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरैजसो प्रविधि र स्वास्थ्य संस्थाहरु शहर केन्द्रित छन् । यो समग्र मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय सुपर स्पेशलाइज सेवा जिल्ला एवं ग्रामीण तहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर विगत २ वर्षदेखि अटो इम्युन डिजिज अन्तर्गत पर्ने बाथ रोग उपचारका सेवा जिल्ला तहसम्म पु¥याउन सकेमा धेरै नेपाली जनताले स्थानीय तहबाट नै एकको दुइृ गुणा सुविधा पाउन सक्ने अवधारणा र रणनीति लिएर काम गरिरहेका छौं ।
यद्यपी बाथ रोग उपचार सेवा हरेक जिल्लामा पुग्नुपर्छ । यो हाम्रो महत्वकांक्षी योजना हो । हरेक वर्ष एउटा जिल्लामा बाथ रोग सेन्टर स्थापना गर्ने हाम्रो संकल्प छ । काठमाडौंको रातो पुलबाट शुरु भएको नेशनल बाथ रोग सेन्टरको यात्रा ललितपुरको जावलाखेल शाखाको बिस्तारसँगै पोखराको मुस्ताङ चोकसम्म पुगेको छ । यसले पोखरा आसपास क्षेत्रका जनताले आफ्नै घर आँगनमा बाथ रोग उपचार सेवा प्रप्त गर्न सफल भएका छन् ।
राजधानीबाहिरबाट प्रदान गरिने बाथ उपचार सेवामा कुनै कमी हुँदैन । अत्याधुनिक सेवा सुविधा र उपकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । रोग पहिचानका लागि अटोइम्युन ल्याबको राम्रो व्यवस्था छ । यद्यपी राजधानीबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा सो सरहको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि कञ्जुस्याई गरेका छैनौं ।
उचित प्रविधिको छनौट गरेर केन्द्र स्थापना गर्न सक्षम भएका छौं । यहाँबाट इएनए प्यानल टेष्ट लगायतका धेरै परीक्षणसुविधा प्रदान गरिरहेका छौं । यस किसिमको सुविधा लिन भारत लगायत अन्य विकसित देशमा पुग्नुपथ्र्यो । यसका लागि धेरै खर्च हुन्थ्यो । त्यो खर्चको तुलनामा अहिले ४ गुणा कम सस्तो मूल्यमा नेपालमा सुविधा दिइरहेका छौं । यो हाम्रो उपलब्धी हो । बाथ रोगका लागि क्लिनिकल सुविधा सहित अत्याधुनिक अटो इम्युन ल्याब स्थापना तर्फ हामी अग्रसर छौं । अटोइम्युन रोग परीक्षणका लागि अन्य मुलुक जानुपर्ने परनिर्भरतालाई चुनौति दिएर स्वदेशमा यस किसिमको सुविधा प्रदान गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेका छौं । अहिले बाथ पहिचानका लागि नेलफोल्ड क्यापिलरोस्कोपी टेष्ट स्थापना गरी सेवा दिन सकेका छौं । बाथले सुक्ष्म नशाहरुलाई पार्ने असर हेर्न यो टेष्ट महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस प्रविधिले बाथले नशालाई कति असर ग¥यो र नशाहरुको अवस्था के छ ? भन्ने देखाउँछ । यस किसिमको सेवा विरलै पाइन्छ ।
इएनए प्यानल टेष्ट
इएनए भनेको हाम्रो एन्टिबडिजहरुको परीक्षण हो । एन्टिबडिज भनेको रोग निरोधक शक्ति हो । यो शरीरमा सुक्ष्म भएर बसेको हुन्छ । तर बाथ रोग हुँदा यो सक्रिय हुन्छ र शरीरलाई असर गर्न थाल्छ । यसले गोलिगाँठा, मुटु, मिर्गौला, छाला, आँखामा बिस्तारै असर गरेर बाथको भयावह स्थिति सृजना गर्छ । यद्यपी शरीरमा १८ वटा एन्टिबडिज कसरी सक्रिय भइरहेको छ ? भन्ने कुरा इएनए प्यानल टेष्टबाट पत्ता लाग्छ ।
हामीले २ वर्षको अवधिमा कुल जनसंख्याको करिब ०.५ प्रतिशत जनतालाई बाथ उपचार सेवा दिन सफल भएका छौं । अमेरिकन सोसाइटी अफ ¥युमेटोलोजीको करिब १० प्रतिशत जनतालाई बाथ रोग हुने तथ्यांकलाई आधार मान्दा मुलुकमा बाथ रोग भएका १० प्रतिशत बिरामी मात्र हाम्रो उपचारको पहुँचभित्र छन् । ९० प्रतिशतले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् । अहिले हरेक दिन २ सय जनाको बाथ उपचार गर्ने हाम्रो क्षमता छ । त्यसैले पनि हामीले बाथ रोग उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर बिकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेका छौं । यसका साथै स्थानीय तहमा बाथ रोग उपचार गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन तर्फ पनि अग्रसर छौं । आगामी २ वर्षभित्र हरेक दिन ५ सय जना बाथरोगी हेर्न सक्ने क्षमता विकास गरिरहेका छौं ।
-बाथरोग उपचारमा रहेका बिरामीले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि नछोड्नुहोला ।
-औषधिको नकारात्मक असर न्यूनिकरण गर्न चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्रा मिलाएर सेवन गर्नुपर्छ ।
– बाथ रोगको उपचार नहुँदा विभिन्न समस्याहरु आउने गर्छ तर उपचार पाएमा जटिलताबाट छुट पाउन सकिन्छ ।
– बिहान उठ्दा शरीर अ¥ह«रो हुने र गोली गाँठा दुख्ने समस्या भएमा तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला ।